Deeq lacag ah oo ka timid jaaliyadda Soomaaliyeed ee Atlanta Goergia (USA) oo la gaarsiiyay bukaanada jiifa qaar ka mid ah isbitaallada Muqdisho
Golaha Samafalka & Horumarinta Soomaaliyeed ayaa deeq lacag ah gaarsiiyay bukaanada ku jira isbitaalada Muqdsihu 6-7/08/2007 , deeqdan ayaa la gaarsiiyay bukaanada ku jira isbitaalada kala ah : Madiina , Keysaney, Banadir & isbitaalka Xaawo Cabdi .
Deeqdan ayaa loo gaarsiiyay bukaanada sida soo socota :-
Magaca Isbitaalka iyo Tirada bukaanka deeqdan la gaarsiiyay
1 Madina 94
2 Keysaney 80
3 Banaadir 97
4 Xaawo Cabdi 61
Isku dara: 332 bukaan
Isu geynta bukaannada la gaarsiiyay deeqdan oo gaarsaysa 332 bukaan ayaa mid kastaba waxaa la siiyay 300,000 SHso , isbitaal kastana waxaa kaloo la gaarsiiyay 1000,000 Shso oo loogu talagalay shaqaalaha isbitaalka ee tabarta daran.
Deeqdan waxaa ku tabarrucay jaaliyadda Soomaaliyeed ee Atlanta-Georgia (Maraykanka ) si loogu caawiyo walaalahooda dhibaataysan.
Baaq & Mahad celin
Golaha Samafalka & Horumarinta Soomaaliyeed wuxuu u mahad celinayaa walaalaha Soomaaliyeed ee ku tabarrucay deeqdan , wuxuuna Ilaahay uga baryayaa in uu ugu bedelo wax ka kheyr badan .
Sidoo kale Goluhu wuxuu ugu baaqayaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed in ay u istaagaan caawinta walaalahooda dhibaataysan.
Kaalmadiina waxaad ku soo hagaajin kartaan accounada Golaha ee kala ah :-
Qaran Express: 117
Mustaqbal Bank: 22315
Tawakal Bank: 309
Wixii faahfaahin intaa dheer kala xiriir emailada Golaha :-
Kaalmeeye@hotmail.com , kaalmeeye@yahoo.com